Soosaarayaasha Waxsoosaarka Xarunta - Shirkadaha Alaabada Shiinaha & Warshad
Budada Jelly waxaa laga sameeyaa carrageenan, xanjada konjac, gulukooska iyo waxyaabaha kale ee ceyriinka cuntada, waa xalka tooska ah ee samaynta jelly. Adoo isticmaalaya carrageenan oo lagu daro waxyaabo kale, budada jelly waxay yeelan kartaa astaamaha xinjirowga, haynta biyaha waxayna ka dhigaysaa jelly mid jilicsan. Budada Jelly waa nooc ka mid ah fiber-ka nafaqada sare leh oo leh biyo-ku milma semi-fiber, kaas oo aqoonsaday shaqada daryeelka caafimaadka ee gudaha iyo dibedda. Waxay si wax ku ool ah u eryi kartaa atamka biraha culus iyo shucaaca i ...
Budada nacnaca jilicsan badanaa waa jel isku dhafan, oo la mid ah isticmaalka waxyaabaha cuntada ku jira jelly, agar ku saleysan budada nacnaca waxay leedahay xoog gel aad u sarreeya. Waa suurtogal in la sameeyo nacnac jilicsan oo leh gelatinization xoog leh, hufnaan sare, muraayad cad, dabacsanaan xoog leh iyo dhadhan jilicsan iyadoo la isku darayo agar-agar, carrageenan iyo waxyaabo kale. , daahfurnaan wanaagsan, qadar yar oo lagu daro, qiime jaban, adjusta ...
Wakiilka Sharaxaya Biirka waxaa laga soosaaray algae-da tayada sare leh. Maaddaama ay tahay badeecad cagaaran oo dabiici ah, nabadgelyadeeda waxaa aqbalay Ururka Qaramada Midoobay ee Beeraha Cuntada. Waxtarka wakiilka cadeeya wort waa inuu nuugo borotiinka wort, ka saaro nitrogen isku qasan, ka dhigo biir cad oo dib u dhigo nolosha shelf ee biirka. Wakiilka cadeeya biirka wuxuu leeyahay laba nooc: granules iyo budo. Waxay leedahay astaamaha isticmaalka fudud, qiimo jaban iyo saameyn muuqata, waxayna si hufan u horumarin kartaa maya ...